आउदै रबि लामिछाने सहभागी ‘को बन्छ करोडपति’, यस्तो छ प्रसारण हुने मिति – ThikThak News
आउदै रबि लामिछाने सहभागी ‘को बन्छ करोडपति’, यस्तो छ प्रसारण हुने मिति
रबि लामिछानेले सहभागी भएको ‘ को बन्छ करोडपति ‘ एपी १ मा प्रसारण हुने मिति सार्बजनिक भएको छ। डेढ हप्ता अघि करोडपति कार्यक्रममा रबि लामिछाने सहभागी हुन पुगेका थिए। रास्कोट अस्पतालको सहयोगार्थ भनेर रबि लामिछानेले चर्चित कार्यक्रम को बन्छ करोडपतिमा सहभागी हुन् पुगेका थिए। यो कार्यक्रममा सके सम्म १ करोड रकम नै जित्ने हिसाबले खेल्न पुगेका रबि ले कति जिते भन्ने कुरा चाहि अहिले सम्म खुलेको छैन । अब भने रबि लामिछानेले सहभागि बनेको कार्यक्रममा प्रसारण मिति तय भएको छ।
जति सुकै जितेपनि यो रकम सम्पूर्ण रुपमा कालिकोट को रास्कोट मा निर्माणका लागि खर्चने यस अघि नै जनाइसकेका छन। रबि लामिछानेका कार्यक्रम का प्रोदुसर दिपक बोहोराले फेसबुक मार्फत फोटो पोस्ट गर्दै आउने आईतवार ५ गतेको को बन्छ करोडपनि हेर्न नभुल्नु होला भनेका छन्। सबै फ्यानहरुले रबि लामिछानेको कार्यक्रम कहिले आउछ भन्दै लामो समय देखि ब्यग्र हुदै पर्खि रहेका थिए। अब भने केहि दिनमा उनीहरुले आफ्नो आइडल रबि लामिछाने करोडपतिको हट सिटमा बसेर खेलेको हेर्न पाउने भएका छन्। केहि दिन अघि मात्र राजिब जैनले १ करोड जितेका छन् अब रबि लामिछानेले कति जिते भन्ने सबैमा खुल्दुली बनेको छ।
रबि को यसै अस्पतालका लागि अहिले सम्म देश तथा विदेश बाट उदार मनका धनि नेपालीहरुले लाखौको सहयोग गरिसकेका छन् र गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यसै क्रममा को बन्छ करोडपति कार्यक्रममा सहभागी बनेर अस्पताललाई रकम जुटाउने काममा रबि लागेका हुन्। रबि लामिछानेको नेतृत्वमा बन्दै गरेको अस्पतालले अहिले सर्बसाधारणलाइ सेवा दिइरहेको छ।
बिदा नलिएको भन्दै नेपालीलाई स्वीडेन सरकारले गर्यो देश निकाला
भोकले रोइरहेको शिशुलाई स्तन चुसाउने एयर होस्टेसको बढुवा
भेटियो १८ बर्षका यस्ता अचम्मका युबा – बाईक, गाडीसम्म जुरुक्कै काँधमा बोक्छन ( भिडियो हेर्नुस )
नेपालीहरुको समस्या र गुनासो सुन्ने, कार्यक्रम लिएर रबि अस्ट्रेलिया जादै ! कहिले र कहाँ हेर्नुस
Previous Article उज्यालो छर्ने कुलमानको मुहारमा मुस्कान ! ९ वर्षे अन्योल चिर्दै सुरु गरे माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’
Next Article तेरिया मगरले गरिन प्रेमजिबन देखि फिल्म खेल्ने सम्मको सबै खुलासा ( भिडियो सहित )